Asaina Ianao Hahatsiaro ny Nahafatesan’i Jesosy Kristy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Chitumbuka Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Géorgien Haoussa Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Yorobà Zoloa
Asain’ny Vavolombelon’i Jehovah ny Olona Eran-tany mba Hahatsiaro ny Nahafatesan’i Kristy
Hisy lahateny, na toriteny, amin’io fotoan-dehibe io.
NEW YORK—Manao ezaka manokana ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany, manomboka amin’ny asabotsy 27 Febroary. Asain’izy ireo ny olona mba hanatrika an’ilay fotoana lehibe indrindra amin’izy ireo, dia ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy. Hatao amin’ny 23 Martsa izy io. Hoy i David Semonian, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny foiben’izy ireo any New York: “Hisy lahateny amin’io fahatsiarovana io. Hohazavaina hoe efa ho roa arivo taona izay i Jesosy no maty ka nahoana no mbola ilaintsika ny nahafatesany, ary nahoana izany no manome fanantenana ho antsika. Tianay ho betsaka araka izay azo atao ny olona handray soa avy amin’io fandaharana ara-panahy io.”
Vavolombelon’i Jehovah valo tapitrisa eo ho eo maneran-tany no hitsidika ny mpiray tanàna aminy mba hanasana azy ireo, mandritra an’io ezaka manokana io. Efa ho 20 tapitrisa no nanatrika an’io Fahatsiarovana io tamin’ny herintaona.
David A. Semonian, Biraon’ny Filazam-baovao, tel. +1 718 560 5000
Fahatsiarovana ny Nahafatesan’i Jesosy
Nahoana no Tsy Mitovy Amin’ny An’ny Fivavahana Hafa ny Fomba Ankalazan’ny Vavolombelon’i Jehovah ny Sakafo Harivan’ny Tompo?